तपाईंको B2B क्रेता को हो? | Martech Zone
तपाईंको B2B क्रेता को हो?
मंगलवार, जुलाई 2, 2013 Douglas Karr
हामी हाम्रो ग्राहकहरू उनीहरूको सामग्रीको स्वरसँग प्राय: संघर्ष गरिरहेका देख्छौं ... उनीहरू चिन्तित छन् कि उनीहरूको सामग्री एकदम परिष्कृत छ वा श्रोताको लागि पर्याप्त परिष्कृत छैन। हामी विश्वास गर्दछौं कि परिष्कारको दायरा सबैभन्दा प्रभावकारी छ। पाठकहरूले उच्च-अधिकार सामग्री खोजिरहेका छन् सामग्रीलाई पछाडि हिड्दैन जुन चासोको विषय होईन। तिनीहरू कम्पनी वा प्रकाशन न्याय गर्दैनन्, तिनीहरू केवल यसलाई पछि सार्छन्। अधिक आधारभूत सामग्री अझै पनि सम्भावितहरूको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ जसले तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवाहरूको समझलाई अभाव गर्दछ। र सबै समयमा उच्च-अन्तको सामग्री लेख्न तपाईंको उत्पादलाई उनीहरूको आवश्यकताको पहुँचबाट अनावश्यक रूपमा राख्न सक्दछ।
कर्पोरेट खरीददारहरूले B2C लेनदेनमा B2C खरीद प्राथमिकताहरू लागू गर्दछ, यसको अर्थ आपूर्तिकर्ताहरूले अत्यधिक लक्षित, प्रयोग गर्न सजिलो अनलाइन अनुभव प्रदान गर्नुपर्दछ। के तपाईं आफ्नो खरीददार बुझ्नुहुन्छ?
टैग: b2bb2b खरीददारb2b व्यक्तित्व
WHYAnalytics: तपाईंको साइट को भ्रमण गर्दै छ?
राम्रो स्थिति अद्यावधिकहरूका लागि १० सल्लाहहरू